Fanaanada Saba Anglana ma Talyaani & Somali baa mise Talyaani/Itoobiyan +Video – SBC
Fanaanada Saba Anglana ma Talyaani & Somali baa mise Talyaani/Itoobiyan +Video
Fanaanada caanka ah ee Saba Anglana ayaa dad badan waxay u haystaan inay tahay gabar ay iska dhaleen waalid Talyaani & Soomaali ah, halka ay jirto warar kale oo ku aadan in ay iska dhaleen Aabe Talyaani ah & Hooyo Itoobiyaan ah.
Hadaba gabdhan oo dhawr sano ka hor soo saartey hees Soomaali oo ka sheekanaysa jaceylka Hooyada, ayaan ka hor bishii November 2009-kii iyadu qudheedu waxay isu haystey inay tahay Soomaali/Talyaani laakiin haatan waxay cadeysay inay tahay gabar ay iska dhaleen Talyaani & Itoobiyaan.
Hadaba sheekadani sidee ku timid.
Raadraac aan ku sameynay Fanaanada Anglana taariikhdeeda ayaan ku ogaanay in gabadhani ay ku dhalatey magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, sanadka ay dhalatey xitaa website-keeda lagu qoro luuqadaha Talyaaniga & Ingiriiska laguma xusin, laakiin qiyaas ahaan todobaatameeyadii ayey dhalatey, iyadoo ay iska dhaleen nin Talyaani ah oo ka mid ahaa ciidamadii Talyaaniga ee ka qayb qaatey dagaalkii labaad ee aduunka, ninkaasi oo la sheegay in uu Afrika u aaday si uu isku hilmaamsiiyo dhibaatadii uu u soo soo joogay ee dagaalkii Labaad ee aduunka. Halkan riix si aad u aragto website-ka Saba qaybta Taariikhdeeda oo Talyaani ku qoran
Website-ka NPR.org sida ka muuqata lin-kan Halkan riix warbixinta npr wuxuu wareysi la yeeshay Saba 2008, waxay ku sheegtey wareysigaasi in iyadoo shan sano jir ah ay ka soo tagtey magaalada Muqdisho ka dib markii guurka hooyadeed & Aabaheed ay ka soo horjeesatey xukuumadii Maxamed Siyaad Barre taasi oo ku tilmaamtey guurkaasi mid aan sharci aheyn, sida ay sheegayso Saba qoyskeeda xiligaasi ayaa laga eryey Muqdisho, waxaana ay timid wadanka Talyaaniga halkaasi oo ay ku soo barbaartey.
Saba waxay wareysigaasi ku sheegtey in u hilboobayso magaaladii ay ku dhalatey ee Muqdishu waxay sheegtey in ay yared markii ugu dambeysya ee Muqdisho ka soo tagtey waxaase ay xustey in ay xusuusato inay aheyd magaalo shidan oo nabad ah.
“Waxaa jira 192 milyan oo qof oo aduunka ku sugan kuwaasi oo aan joogin halkii ay ku dhasheen, aniguna kuwaasi ayaan ka mid ahay, waayo waxaan ka soo tagey Soomaaliya anoo caruur ah” ayey tiri Saba.
“Africa si guud waa meel aad cimilo fiican, dhinac waa meel waa macaan cimilio ahaan, farxad, dhanna waxaa ka jira xaalado dagaal oo awood ku dhisan, rabshado ka taagan yihiin, labadaasi arimood ayaa kuwa iska soo horjeeda” ayey tiri Saba.
Inkastoo Saba Anglana ay website-keeda ku soo bandhigtey in ay tahay Talyaani/Itoobiyaan hadana barta Internet-ka ee Wikipedia waxaa ku qoran warbixin ka hadlaysa taariikhaha Saba oo sheegaysa inay tahay Soomaali/Talyaani .
Laakiin blog Internet oo lagu qoro dadka caanka ah (Celebrity) ee Itoobiyaanka ah oo lagu magacaabo wuxuu ku sheegay Saba ina tahay gabar ay iska dhaleen Itoobiyaan & Talyaani waalid ka soo jeeda, balse ay ku dhalatey wadanka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho.Halkan ka eeg warbixinta blog-ga Itoobiyaanka (Celebrity)
Waxaa blog-ga lagu xusey in Saba ay xitaa xusuusato meelihii ay ka tagtey Soomaaliya ee aan aheyn Muqdisho, waxay sheegtey in Aabaheed uu ka shaqeyn jirey deegaanka Boolimoog ee Gardafun ee ku dhaw degmada Caluula ee gobolka Bari, waxay ku sheegtey wareysi lala yaeeshay in Aabaheed oo halkaasi ka shaqeynaya ay su’aalo waydiiyeen ciidamo Booliis ah oo ka tirsanaa dawladii Soomaaliya, kuwaasi oo aaminsanaa in Aabaheed uu ahaa Jaajuus u shaqeeya Mareykanka, waxay sheegtey in Aabaheed uu u joogay Soomaaliya isagoo jeclaa Afrika, waayo waxay tiri halkaasi waxaa ku dhashay aniga & walaashey.
Saba si wanaagsan ayay ugu hadashaa luuqada Soomaaliga gaar ahaan lahjada reer Xamarka oo ay sheegtey inay ka baratey Hooyadeed.
Saba Anglana socdaal ay ku tagtey wadanka Itoobiya October 2010 waxay ku soo ogaatey in ay hooyadeed ay ka soo jeedo qowmiyada Oromada ee ku nool Koonfurta wadankaasi Itoobiya, waxaana ay halkaasi kula soo kulantey qaar ka mid ah qaraabada & qoyska hooyadeed, sida lagu xusey website-ka Wash News Afrika oo looga faaloodo arimaha nadaafada biyaha & caafimaadka.
Intii ay joogtey magaalada Adis Ababa 2010 waxay halkaasi ku sameysey album lagu magacaabo “Biyo” oo ah erey Soomaali ah iyadoo ku xustey albumkaasi qiimaha biyuhu u leeyihiin nolasha.
Inkastoo Album-ka ay soo saartey ee heesaha ay Saba ku heesayso luuqada Talyaaniga waxay albumka u bixisay magaca Biyo, waxaase dharka ay ku heesayso & goobtuba ay tahay Itoobiya.
Heesta Biyo ee Saba waxay ka gashay kaalinta 11-aad qiimeynta heesaha European World Music Charts laakiin website-kaEuropean World Music Charts marka uu ka hadlayo asal ahaan fanaanada wuxuu ku sheegay in uu ka jiro jahwareer halka ay ka soo jeedo waxaana uu ku soo koobay Somaaliya/Talyaani & Itoobiyaan. Halkan ka eeg warbixinta World Music Charts Europe
Wareysi ay ku bixisey luuqada Talyaaniga oo ay kaga hadleysey heesta Biyo waxay dhinac kasta oo ka mid ah heesaheeda, qalabka Music ee ay ku heesayso uu ahaa musica Soomaaliga gaar ahan instruments waa qaab music Soomaali ah.
Link Video ga hoose ka daawo heesta Huuwaa ee Fanaanada Saba taasi oo ka hadlaysa Jaceylka Hooyada.